Hey you don't know??? — Steemit
Hey you don't know???
THE TIME အ Vault
TIME က Labs
Shop တွင် TIME
ယခုနှစ် PERSON သည်
TIME အဖုံး STORE
TIME က EDGE
မိဘများအဟောင်းက Man လက်ထပ်ခြင်းရန်ငြင်းဆန်သူကားအဘယ်သူ 16-တစ်နှစ်တာအဘိဓါန် Old ငါ့သမီး, ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရမည်မှာအပေါ်ဟော့ဟင်းချက်ဆီလောင်းခြင်း
မက်ဒေါ်နယ်ရဲ့ကိုယ်တော်အသက် 30 နှစ်ချက် Cheeseburgers, ရဲတပ်ဖွဲ့ပြော Make ဖို့ငြင်းဆန်ပြီးနောက်က Man ရွှေ Arch တိုက်ခိုက်မှု
ဝါရှင်တန်ရှိကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာသည်မတ်လ မှစ. ပုံများ Moving
ဘယ်လို Gaslighting သင့်စိတ်ကျန်းမာရေးထင်သလောက်
စိုးရိမ်စိတ် OVEREAT ရန်သင့်အားမောင်းနှင်အခါအဘယ်သို့ပြုရမည်
Julia NAFTULIN / HEALTH.COM ဇွန်လ 20, 2017 by
ပြီးတာနဲ့ခဏ၌, သင်ပြင်းထန်စွာချို့တဲ့အိပ်သို့မဟုတ်ထုတ်အလေးပေးနေသည့်အခါများကဲ့သို့သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ဖောက်ပြန်မေးခွန်းထုတ်တဲ့ခဏအခိုက်, ရှိသည်ဖို့ပုံမှန်ပါပဲ။ gaslighting: ဆက်ဆံရေးသင်သည်အမြဲတစေသင့်ကိုယ်ပိုင်ဗီဇအတိုင်းခံစားချက်တွေဒုတိယ-ခန့်မှန်းအရွက်လျှင်မူကား, သင်စိတ်ခံစားမှုအလွဲသုံးစားမှုတစ်ခေတ်မီပုံစံတစ်ခုသားကောင်ဖြစ်နိုင်သည်။ အလွဲသုံးစားမှု၏အခြားအမျိုးအစားများလိုပဲ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရင်ခုန်စရာနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အပါအဝင်ဆက်ဆံရေးအမြိုးမြိုးဖွစျနိုငျ gaslighting ။
ဘင် Michaelis, Ph.D တစ်ဦးက New York City,-based လက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်, gaslighting ၏သားကောင်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။ မိမိအလူနာ-we'll တဦးသူမ၏မခေါ်ဘို့သူမ၏ခင်ပွန်းလိင်စဉ်အတွင်းအခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏အမည်ကိုအော်သည့်အခါက Marie-အဆိုပါ gaslighting စတင်ခဲ့သည်။ သူမကသူ့ကိုနှင့်အတူအဖြစ်အပျက်ဆွေးနွေးရန်ကြိုးစားခဲ့သောအခါသူ flatly ဟုသူကပြောသည်င်သောအရာကိုငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်သူမအမှုအရာကြားနာခဲ့သည်မာရီကပြောကြားခဲ့သည်။ မာရီသူမသောက်လည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်ရမယ်နေသေးတယ်။ မာရီရဲ့ခင်ပွန်းတော်ကိုအစဉ်မပြတ်စှပျစှဲမှနျကနျကွောငျးရာခခြေကျြကိုပြောင်းလဲမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်မာရီသူ့ကိုမေးခွန်းထုတ်သောအခါ, ထိုသူမလှညျ့သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဆိုရချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထို့နောက်လဲလျောင်းဆက်ပြောသည်။ မာရီသူမ၏ခင်ပွန်းတစ်ဦးကိစ္စတပြင်လုံးကိုအချိန်ပုန်းအောင်းခဲ့သဘောပေါက်လာသောအခါ၎င်းသည်တစ်နှစ်အကြာတွင်နီးပါးသည်အထိမဟုတ်ခဲ့ပေ။
"[Gaslighting] မိုဃ်းကောင်းကင်ကျော်အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျော်နောက်တဖန်နှင့်ပထမဦးဆုံးမှာသင်တို့ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်တူ၏ '' အဘယ်သူမျှမမျှ, '' GAIL Saltz, MD အဆိုပါ Podcast တခုကိုအမျိုးမျိုးကို The Power of တဲ့စိတ်ရောဂါများနှင့်အိမ်ရှင်ကပြောပါတယ်။ "ထိုအခါအချိန်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဟုသို့သငျသညျ manipulate မှစတင်သည် '' ငါတကယ်မိုဃ်းကောင်းကင်သည်အဘယ်အရာအရောင်မမြင်နိုင်ပုံပါဘဲ။ '' ဒါဟာနတ်၏မယ့်ဒီအသိပါပဲ။ "
RELATED: အသက်ပြင်းပြင်းရှူပါ: နည်းမှန်လမ်းမှန်သင့်မှတ်ဉာဏ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်ပါစေကိုရှုသွင်းခြင်း
သငျသညျမာရီကဲ့သို့အ gaslighting တစ်သားကောင်ပထမဦးဆုံးမှာလှည်စားနိုင်ပါတယ်ခဲ့ဘူးပါတယ်အသိအမှတ်ပြု, သင့်ရဲ့ Next ကိုကြီးရာ၏ရေးသားသူသူသည် Michaelis, says: 10 အသေးစားခြေလှမ်းများ Moving Get နှင့်မင်္ဂလာကိုရယူပါရန်။ တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောသောအဖြစ်မှန်ပေါ်ထားခြင်းလျှင် "အစပိုင်းမှာ, သင်တို့ကိုအဘယ်ကြောင့်ငါသည်ထိုနေ့ကိုချွတ်ခဲ့တယ်, စဉ်းစားပါမယ်? ငါပင်ပန်းခဲ့သလား "ဟုအဆိုပါ gaslighting ဆက်လက်အဖြစ်, သားကောင်များသူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်၎င်းတို့၏တရားသဖြင့်စီရင်ပိုပိုပြီးမေးခွန်းထုတ်ဖို့စတင်။ Michaelis သူတို့ gaslighted ခံရပါတယ်နားလည်သဘောပေါက်မတိုင်မီဒီလအတွင်းသို့မဟုတ်ပင်နှစ်ပေါင်းအပေါ်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ "သူတို့အဆက်မပြတ်သူတို့ကိုယ်သူတို့စစ်ဆေးသူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုပြန်စစ်ဆေးချင်သောကွောငျ့ gaslighting တွေ့ကြုံခံစားသူကိုလူတွေကစိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါလက္ခဏာတွေပြသနိုင်ပါသည်," ဟုဒေါက်တာ Michaelis ကပြောပါတယ်။ gaslighting ၏ယုံကြည်မှု-depleting သဘာဝမဟုတ်မှသာဆက်ဆံရေးအတွက်တစ်သားကောင်ရဲ့ဘဝများစွာကိုသို့မဟုတ်အားလုံးကိုရှုထောင့်များတွင်တိုးမြှင့်စိုးရိမ်စိတ်အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ အတော်များများက gaslighting သားကောင်များသူတို့ကိုယ်သူတို့ berate သို့မဟုတ်အားလုံးကိုအချိန်ကိုတောင်းပန်ရန်လိုအပ်ကြောင်းခံစားရတယ်ဒေါက်တာ Saltz ရှင်းပြသည်။
Gaslighting အဖြစ်ကောင်းစွာတစ်ဦးအလုပ်ခွင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကိုထင်ရှားစွာပြနိုင်ပါတယ်။ "သင်၏သူဌေးတစ်ဦးအမှားဖုံးကွယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဝေမျှဖို့ဆိုလိုဘူးသတင်းအချက်အလက်တက်ကိုဖုံးလွှမ်းရန် gaslighting သုံးနိုင်ပါသည်," Michaelis ကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာလည်းယှဉ်ပြိုင်သူရွယ်တူချင်းအကြားအသုံးပြုတဲ့ passive-ရန်လိုအမူအရာဖြစ်နိုင်တယ်။ "
သင် gaslighted ခံရပါတယ်နားလည်သဘောပေါက်လျှင်, သင်အသိအမှတ်မပြုဖို့လိုပါတယ်ပထမဦးဆုံးအရာတစ်ခု gaslighter သူတို့မှားဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုထဲကကိစ္စများရှိအထူးသဖြင့်လျှင်, သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများမသိမကျမည်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, gaslighter ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Michaelis အီးမေးလ်သို့မဟုတ်စာသားကိုမှတဆင့်ကဲ့သို့တစ်မှတ်တမ်းတင်ထားသောပုံစံအတွက် gaslighter နှင့်အတူသင်ရှိသည်စကားဝိုင်းများအားလုံးကိုပို့ချအကြံပြုထားသည်။ သာတွေ့ရှိရပါသည် gaslighting သည့်အခါထို့နောက်၎င်းတို့သည်မူလကဆိုပါတယ်ဘာလူတစ်ပြောပြပါ။ "သူတို့ကဆိုပါတယ်သောအရာကိုငြင်းပယ်ကြပါဆက်လက် အကယ်. သူတို့ကဖြစ်ပျက်တဲ့ကွန်ကရစ်ဥာဏ်ရှိသည်ဒါကြောင့်, သင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောသက်သေအထောက်အထားများထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်" ဟု Michaelis ကပြောပါတယ်။ မိတ်ဆွေတစ်ဦးသို့မဟုတ်မိတ်ဖက်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်သည့်အခါဤနည်းလမ်းကိုအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
RELATED: အရာအားလုံးအကြောင်းတရားစွဲခံရ Feeling ရပ်တန့်ဖို့ဘယ်လို
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆက်ဆံရေးမှာတော့ Michaelis အဆိုပါထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုပိုပြီးရည်ရွယ်ချက်စေနိုင်သည်သောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကဲ့သို့တတိယပါတီထွက်ရောက်ရှိအကြံပြုထားသည်။ သင်ကူညီမိတ်ဆွေတစ်ဦးသို့မဟုတ်မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကူညီမှုကိုရယူရန်သကဲ့သို့ကောင်းစွာသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေး၌ဤလမ်းကြောင်းကိုယူနိုင်ပါတယ်။ "သင်က t ကိုဖြစ်ပျက်ကိုရှာဖွေလိုလျှင်
TIME k k nyaya marrayy
THE TIMEaVault
TIME k Labs
Shop twin TIME
pyawshwinmhu aatwat hphoet aahkyanelamnywhaan
100 sya jar aashisoneluutway
muulahcarmyetnhar shar thaaehkwngya
NEXT ko myoesaathkaunggsaungmyarr
yahkunhait PERSON sai
pyasanarko kyawlwhar ninehcayraan
TIME aahpone STORE
TIME k EDGE
saint kaallehpoeneeyarr muupine hkwinaahkwinaarayy
aay de rwayhkyaalmhumyarr
TIME k aaat utmyarr
pyanlai paranghtoteraan nhang hkwngpyu
SITE ko MAP
itwin warshintaan shi kyawanmathoetrae aasaat tar sai maatlamha sai aamyarrhcumhar aahcwmhtaat hawpyawwmhu myarrshiparsalarr
mibhamyarr aahaunggk Man laathtauthkyinn raan ngyinnsaan suu karr aabhaalsuu 16- taitnhaittaraabhidharan Old ngar samee, relltauthpwal pyaww r maimhar aapaw hot hainnhkyet se laungghkyinn
maat daw naal rae kotawaasaat 30 nhaithkyet Cheeseburgers, relltauthpwalpyaww Make hphoet ngyinnsaan pyeenoutk Man shway Arch titehkitemhu
warshintaan shi kyawanmathoetrae aasaat tar saimaatl mhahc. ponemyarr Moving
bhaallo Gaslighting saint hcatekyannmarrayyhtainsalout
hcoerainhcate OVEREAT raan sang aarr maunggnhain aahkarabhaalshoet pyuramai
Julia NAFTULIN / HEALTH.COM jwanl 20, 2017 by
pyeetarnae hkan , sain pyinnhtaanhcwar hkyahoettae aiut shoetmahote htote aalayypayy nay saeet aahkar myarr kaeshoet sainsai saineat kopine hcate hpoutpyan mayyhkwannhtote tae hkan aahkite, shisai hphoet ponemhaan parpell . gaslighting: saatsanrayy sainsai aamyaelltahcay saint kopine bej aatine hkanhcarrhkyettway dutiy- hkaant mhaannarwat shin muu karr, sain hcatehkanhcarrmhu aalwalsonehcarrmhu taithkayat me ponehcan taithku sarrkaung hpyitninesai . aalwalsonehcarrmhu eata hkyarr aamyoeaahcarrmyarr lopell, puggolrayy rainhkonehcarar nhaint parawhpaatshinnaal aaparaawain saatsanrayyamyaoe myaoe hpw hcyanongya gaslighting .
bhain Michaelis, Ph.D tait uk New York City,-based laattwae hcatepanyarshin, gaslighting eat sarrkaungmyarr nhaint aatuu aalotelotehkae sirasai . mimialuunar-we'll t u suumeat m hkaw bhhoet suumeat hkainpwann liin hcainaatwin aahkyarr aamyoesamee tait u eata mai ko aaw saeet aahkark Marie-aasopar gaslighting hcatainhkaesai . suumak shuko nhaint aatuu aahpyitaapyet swaynwayraan kyaoehcarrhkae sawaahkarsuu flatly hu suu kapyawwsai ng saw aararko ngyinnpaal hkyinn nhaint suu mamhuarar kyarrnar hkaesai mar re k pyawwkyarrhkaesai . mar re suu m sout laee aamyarrkyee shihkaetaal ramaal naysayytaal . mar re rae hkainpwann tawkoahcain mapyat hchapyahchaell mha nya k nya kwayarngya rar hk hkyay kyaya ko pyaungglell maihpyitkyaungg nhaint mar re shuko mayyhkwannhtote sawaahkar, htosuu m lhanyya sarotesaung hkaesai so r hkyinpartaal darpaymae hthoetnout lell lyaungg saatpyawwsai . mar re suumeat hkainpwann tait u kihchc t pyin lone ko aahkyane pone aaungg hkae sabhawpout lar sawaahkar ၎innsai taitnhait aakyaartwin neeparr saiaahti mahote hkae pay .
"[Gaslighting] mogh kaunggkain kyaw aahcaimraung hpyitpartaal kyaw nout tahpaan nhaint pahtam u sone mhar sainthoet kaeshoet hpyit lain maal hu taithcone tait u nhaint tuueat ''abhaalsuu myaha m myaha, '' GAIL Saltz, MD aasopar Podcast tahkuko aamyoemyoeko The Power of tae hcaterawgar myarr nhaint aainshink pyawwpartaal . " htoaahkar aahkyane kyaw puggol tait u hu shoet s ngya sanyya manipulate mhahcatainsai '' ngar takaal mogh kaunggkain saiabhaalaarar aaraung m myinnine pone parbhell . '' darhar naat eat m ae de aasi parpell . "
RELATED: aasaat pyinnpyinn shuu par: naee mhaan lam mhaan saint mhaat nyarn ko pomo kaunggmwan hcay nineparhcay ko shu swinhkyinn
s ngya s nyya mar re kaeshoeta gaslighting tait sarrkaung pahtam u sone mhar lhai hcarr ninepartaal hkaebhuu partaal aasiaamhaatpyu, saintrae Next ko kyee rar eat rayysarrsuu suusai Michaelis, says: 10 aasayyhcarrhkyaylhammyarr Moving Get nhaint main g lar ko rayuupar raan . taithcone tait u k saint rae kopineanay hpyint kwalpyarr hkyarrnarr saw saw aahpyitmhaan paw htarrhkyinnshin " aahcapinemhar, sainthoet koabhaal kyawwng ngarsai htonae ko hkyawat hkaetaal, hcain hcarr parmaal? ngar painpaann hkaesalarr " huaasopar gaslighting saatlaat aahpyit, sarrkaungmyarr suuthoetkosuuthoet nhaint ၎innthoeteat tararr s hpyang hcerain popopyee mayyhkwannhtote hphoet hcatain . Michaelis suuthoet gaslighted hkanr partaal narrlai sabhawpout matineme delaaatwin shoetmahote pain nhaitpaungg aapaw swarr ninepartaal lhoetsopartaal . " suuthoet aasaatmapyat suuthoetkosuuthoet hcaitsayy suuthoetkosuuthoet ko pyan hcaitsayy hkyin sawkwayarngya gaslighting twaekyuan hkanhcarr suu ko luutwayk hcate ko lwhammoe-compulsive rawgar lakhkanartway pya s nineparsai," hudouttar Michaelis k pyawwpartaal . gaslighting eat yonekyimhu-depleting sabharw mahote mha sar saatsanrayy aatwat tait sarrkaung rae bhaw myarrhcwarko shoetmahote aarrloneko shu htaw int myarrtwin toemyahaint hcoerainhcate aahtoutaakuupyu ninepartaal . aatawmyarrmyarrk gaslighting sarrkaungmyarrsuuthoetkosuuthoet berate shoetmahote aarrloneko aahkyane ko taunggpaanraan loaautkyaungg hkanhcarrrataaldouttar Saltz shinnpyasai .
Gaslighting aahpyit kaungghcwar tait u aalotehkwin paatwaannkyintwin ko htainsharrhcwar pya ninepartaal . " saineat suuhtayy tait u aamhar hponekwal darmhamahote suuthoet waymyaha hphoet solo bhuu satainnaahkyetaalaat taat ko hpone lwhamraan gaslighting sone nineparsai," Michaelis k pyawwpartaal . " darharlaee yhain pyaine suu rwal tuu hkyinnakyarr aasonepyutae passive- raan lo aamuuaarar hpyitninetaal . "
sain gaslighted hkanr partaal narrlai sabhawpout shin, sain aasiaamhaatmapyu hphoet lopartaal pahtam u soneaarartaithku gaslighter suuthoet mhar hpyithkyinn nhaint aatuu shoetmahote hteinhkyaotemhu htellk kihchcamyarr shi aahtuu s hpyint shin, suuthoetrae loteraut myarreat aakyoesaatroutmhu myarr masi m kya mai aakyaungg hpyitpartaal . i kihchcatwin hkunhait, gaslighter htiuttite rainsine aalotelote ninepartaal . Michaelis aeemayyl shoetmahote hcarsarrko mhat saint kaeshoet tait mhaattamtain htarrsaw ponehcanaatwat gaslighter nhaint aatuu sain shisai hcakarrwinemyarr aarrloneko phoethkya aakyaanpyu htarrsai . sartwaeshiraparsai gaslighting saeet aahkar hthoetnout ၎innthoetsai muul k sopartaal bhar luutait pyawwpyapar . " suuthoet k sopartaal saw aararko ngyinnpaal kya parsaatlaat aakaal. suuthoet k hpyitpyet tae kwankarait uarn shisai dar kyount, sain mhaattamtain htarrsaw saatsay aahtoutaahtarrmyarr htoutpan ninepartaal" hu Michaelis k pyawwpartaal . matesway tait u shoetmahote matehpaat htiuttite rainsine saeet aahkar i naeelamko aakaunggsone aalotelotepartaal .
RELATED: aararaarrlone aakyaunggtararrhcwalhkanr Feeling rautt ant hphoetbhaallo
parawhpaatshinnaal saatsanrayymhartot Michaelis aasopar htiuttiterainsinemhu popyee rairwalhkyet hcay ninesai saw lhuhcwmaarr aarainnaamyitmyarr kaeshoet tatiy parte htwat routshi aakyaanpyu htarrsai . sain kuunye matesway tait u shoetmahote misarrhcu aahpwalwain tait u kuunyemhu ko rayuuraan sakaeshoet kaungghcwar saineat puggolrayy saatsanrayy i lamkyaunggko yuu ninepartaal . " saink t ko hpyitpyet ko sharhpway lo shin
#good-karma #life #time #steemit
Congratulations @goldbloger3, you have decided to take the next big step with your first post! The Steem Network Team wishes youagreat time among this awesome community.